समाचार « Onlinetvnepal.com
पहीलो करोड पती विजेता राजीव जैनलाई गरिएको १२ कडा प्रश्न,उतर दिन नसकेर भए असिनापसिना !
नेपालमा यसै वर्ष सुरु भएको फ्रेन्चाइज शो ‘को बन्छ करोडपती’ ले पहिलो पटक करोडपति पाएको छ । शोले गरेको घोषणामा पहिलो करोडपति विराटनगरका राजीव जैन हुन् । जैन एमबीए डिग्री होल्डर हुन् साथमा उनी क्विज मास्टर पनि हुन् । १० वर्षदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका उनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीबीए गरेका
तपाइँ कति भाग्यमानी यसरी आफ्नो निधारको साइज हेरेर थाहा पाउनुस !
तपाइँ कति भाग्यमानी यसरी आफ्नो निधारको साइज हेरेर थाहा पाउनुस : शास्त्र अनुसार मानिस को सरिर को बनावट बाट मानिस को बानि व्यहवार सबै थाहा हुने गर्दछ ! कुनै पनि मानिसको सरिरको बनावट अंग हरु बाट उसको व्यक्तित्वको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ ! ज्वातिश हरुले अनुहार हेरेर व्यक्तिको बारेमा भुत
ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्ने क्रममा रुपन्देहीमा एकजना गम्भिर घाईते !
बिग्रीएको विद्युतको ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्ने क्रममा रुपन्देहीको गैंडहवामा एकजना गम्भिर घाईते भएका छन् । गैंडहवा गाउंपालिका वडा नंं ८ मैनहियामा ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्ने क्रममा उक्त दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परि तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नंं १४ का गुरुदत्त चौधरी गम्भिर घाईते भएको स्थानीय सन्दिप गुप्ताले जानकारी दिए । उनी विद्युत
कामिरिता शेर्पाले २३ औँ पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै राखे विश्व कीर्तिमान ! सम्मान स्वरुप लाईक र कमेन्ट गर्नुहोला
कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले २३ औं पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर नयाँ विश्व कीर्तिमान राखेको छ । उन ले आफ्नो नाममा रहेको सर्वाधिक २२ औं पटकको विश्व कीर्तिमानलाई तोडेर नयाँ विश्व कीर्तिमान राखेको हो । सोलुखुम्बुको थामे गाउँका ४९ वर्षिय कीर्तिमानीआरोही कामिरिता र निमा ओङ्दी शेर्पा बुधबार बिहान ७
खाने होइन त ? २५ रुपैयाँमा पेटभर खाना !
२५ रुपैयाँमा खाना ! सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, सत्य हो । भैरहवामा एक व्यवसायीले २५ रुपैयाँमा पेटभरी खाना खुवाउन थालेका छन् । भैरहवाका व्यवसायी रविकुमार रौनियारले आफ्नी स्वर्गीय आमा मायादेवीको च्यारिटेबल फाउण्डेसनअन्तर्गतको ‘अन्नपूर्ण भोजनालय’ मार्फत खाना खुवाउने जमर्को गरेका हुन् । मंगलबारबाट खाना खुवाउन थालिएको छ । शाहाकारी
खुसीको खबर : अब फारम भरेको दुई हप्तामै ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ !
स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि फारम भरेर पनि नपाउनेको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहदा सरकारले दुई महीनाभित्रमा ‘मास प्रिन्टर’ खरीद गरिसक्ने भएको छ । ‘मास प्रिन्टर’ खरीदका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेकाले दुई महीनाभित्रमा आइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले खरीद प्रक्रियामा गइसकेकाले अब सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्रका लागि लामो
स्याङ्जा स्थायी घर भएका २९ वर्षीय शोभितबहादुर बिश्वकर्माको उपाचारको क्रममा इटालीमा मृत्यु भएको छ । क्यान्सर रोगले पीडित बिश्वकर्माको शुक्रबार उपचारको क्रममा अस्पतालमै निधन भएको हो । लगातार बान्ताको समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल पुगेका थिए । तर, उपाचारको क्रममा उनलाई क्यान्सर लागेको पत्ता लागेको थियो। हाल दक्षिण इटालीको फोज्जिया प्रान्तमा
महानगरीय प्रहरी वृत्त, चापागाउँका प्रमुख राजकुमार खिउजुले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दुई दशक नाघिसक्यो ।तर, जेठाजुद्वारा बुहारीको हत्या गरिएको घटनाले उनलाई चकित बनाएको छ । ‘जागिर खाएको यत्रो वर्ष भइसक्यो । यस्तो विभत्स घटना देखेको थिइन’, डीएसपी खिउजु भन्छन् । घटनास्थल हेर्दा एउटा प्रहरी अधिकारीकै आङ सिरिङ हुन्छ भने सर्वसाधारणलाई
जेठाजु बुहारी काण्ड खास बास्तबिकता अर्कै,साउन्ड ईन्जिनर जेठाजुले किन यस्तो गरे (भिडियो सहित )
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ‘सुन साइली’ बोलको गीतले निकै राम्रो चर्चा कमायो। गीतमा अडियो इन्जिनियरिङ गरेका थिए उज्वल महतले। उनै सुन्दर गीतका म्युजिसियनमाथि बिहीबार गम्भीर आरोप लागेको छ। आफ्नै घरमा बुहारीको निर्मम हत्या गरेको आरोपमा अहिले उनी प्रहरी खोरमा छन्। उज्वलले गत मे महिनामाा फेसबुक स्टाटसमा कानको समस्याका कारण अडियो इन्जिनियरिङ
जागिर नपाएर हैरानी हुनु भएको छ भने ओली सरकारले दियो खुशीको खबर : एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारले दुई महिनाभित्र रोजगारी दिने (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
अबको दुई महिनाभित्र एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारले रोजगारी पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन विभिन्न स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याएर पठाइसकिएको जनाएको छ । बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगार दिन परिपत्र समेत भैसकेको